बजेट भुक्तानीमा समस्या - Pradesh Today बजेट भुक्तानीमा समस्या - Pradesh Today
असार ०६, २०७६ प्रिया स्मृती गजमेर
देउखुरी, ६ असार । गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ७ को भवन तोकिएको समयमा निर्माण सकिए पनि बजेट भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ ।
तोकिएको सम्झौता अनुसार वडाको भवन निर्माण कार्य सकिए पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको निर्माण कम्पनीले बताएका छन् । गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ को कार्यालय गोबरडिहामा र वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालय मानपुरमा भवन निर्माण भएको हो ।
भवन निर्माणका लागि भिमादेवी निर्माण सेवा (सुवास रजौरे) र शर्मा कन्ट्रक्सनले (दिनेश राज शर्मा) ठेक्का लिएका थिए । दुबै वडा कार्यालय माघ र चैतमा निर्माण कार्य सके पनि ठेकेदार कम्पनीले पाउनुपर्ने अन्तिम चरणको करिब दस लाख रकम उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।
एउटा वडा कार्यालय निर्माणका लागि ४३ लाख ७८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । निर्माण कम्पनिले प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम लगिसकेका छन् भने तेस्रो अन्तिम किस्ता बाँकी रहको निर्माण कम्पनिले बताएका छन् ।
गाउँपालिकाले उक्त भवन निर्माण कार्यका लागि छुट्याएको बाँकी रकम गाउँपलिकामा छैन भने पछि ठेकेदार कम्पनी अन्यौलमा परेका छन् । भिमादेवी निर्माण सेवाले २ लाख पचार हजार पाउनुपर्ने छ भने शर्मा कन्ट्रक्सनको कम्तिमा पनि ८÷९ लाख रकम आफूहरुले पाउनु पर्ने ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरुले बताए ।
असार मसान्त सकिन लागेको र निर्माणका सामाग्री खरिद गरेका पसलबाट ताकेता गरेको हुँदा हिसाब कसरी मिलान गर्ने भन्ने समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्माण कार्यका लागि किस्ता–किस्तामा रकम निकासा गरेको र अन्तिम चरणमा बिल भुक्तानीका लागि वडा कार्यालय निर्माण गर्न भनेर छुट्याएको रकम छैन भनेपछि आफूहरु आश्चर्य परेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन् ।
गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखिराम ओलीले आफू भर्खर सरुवा भएर यहाँ आएको बताए । ‘पैसा थिएन भने काम कसरी सुरुवात गरियो ? अहिले भुक्तानीको समयमा किन बजेट छैन भनियो, यो बारेमा गाउँपालिकाका प्रमुख, योजना फाँटका जिम्मेवार ब्यक्ति र आफू बसेर निकास निकाल्छौँ ।
कस्तो हो यो प्रेम ?
कुपोषित बच्चा उपचार नपाई घर फर्कदै